Endesa ichadzikisa chikamu chayo kubva muna 2021 | Ehupfumi Zvemari
Vavaki vemari vakamira mumusika wemasheya vanowana manzwiro asingafadzi nenhau yekuti kambani yemagetsi Endesa ichadzikisa mibairo yayo sa2021. Ichi chinhu chinofungidzirwa mu Straté Chirongwaiyo nguva kubva ku2019 kusvika 2021. Nechinangwa chekusimbisa mutemo wayo wekukura uye kushandisa mikana yakavhurwa neiyo nyowani yeshanduko yesimba. Izvi zvinomiririra shanduko yakakosha zvine chekuita nemutemo waanga achitungamira kusvika parizvino.
Mune mazwi eumwe wevatungamiriri vayo, iri pamusoro pekutora mukana wekukura mamiriro nekambani iri muridzi weItari. Enel, uye kuti inotora chikamu zana muzana mukuvhiya kwandakaita makore akati wandei apfuura. Mupfungwa iyi, kambani yeCatalan haichazopa 100% yemubhadharo kune zvikamu zvakave zvichishandiswa mumakore matatu apfuura. Kana zvisiri, pane kudaro, ichadzikiswa kusvika makumi masere muzana ezvo, kunyangwe iine nuance diki yekuti vashoma nevapakati varimari vanofanirwa kukoshesa kubva ikozvino. Sezvo chiri chokwadi chekuti purofiti ichawedzera munguva ino.
Kune rimwe divi, kubva pane ino nyowani maonero, CEO weEndesa akatsanangura kuti "kutanga, isu tinofanirwa kutarisana nedanho idzva rekuchinja kwesimba; chepiri, digitization ichaunza mikana yakawanda yekudzikisa mutengo asi inoda huwandu hwakawanda hwekudyara; uye chechitatu, kuvandudza hukama hwedu nevatengi kunodawo mari nyowani. " Kuitira kutsanangurira kune vanoita mari inova iyo kutenderera kutsva kwekambani yemagetsi zvakanyorwa pane Ibex 35.
1 Endesa: purofiti kugovana
2 Kufanotaura kusvika muna 2021
3 Inotsigirwa nevamiriri vemari
4 Pamatanho e20 euros pamugove
5 Kumusoro kugona
6 Yakagadziriswa mari gore rega
Endesa: purofiti kugovana
Pachine makore maviri kusvika chinja hurongwa hwemihoro kune mugove. Nekuti zvirokwazvo, purofiti yayo yese ichagoverwa mumakore maviri anotevera uye kune rimwe divi zvinofungidzirwa kuti zvakafanana zvichaitwa neakaenzana e5.900 mamirioni euros mumakore mana anotevera. Chimwe chezvikonzero cheiyi shanduko yakakosha mugove iro vanozogovana vagovana ndeyekuti pamamiriyoni mazana matanhatu nemazana mana ezviuru zvavanotarisira kuve mari inofungidzirwa yeEndesa, mamwe mamirioni zviuru zviviri emamiriyoni achagoverwa kumutsidzira, chikamu mune icho chinoshuvira zvinomisa pachayo seimwe yemakambani emagetsi anongedzera mudunhu renyika.
Kunyangwe pane izvo zvinopesana, zvakare zvinoshamisa kwazvo chokwadi chekuti chikamu cheizvi zvinofungidzirwa mabhenefiti chichaenda kune chitsva investments muzvigadziriswazve uye ivo vanogadzirwa mukugadzirwa kwechikamu chitsva chemagetsi chekufamba, icho chave kunzi Endesa X. Chaizvoizvo chikamu ichi chechibvumirano chiri kukurudzira dhipatimendi kusimukira kune rimwe divi uye kuti rinogona kunyange panguva yakati kunyorwe muStock. musika zvakazvimiririra, sezvazvakaitika nemamwe makambani akanyorwa pamisika yemari.
Kufanotaura kusvika muna 2021
Chimwe chinhu chakakosha kwazvo kuratidza ndechekuti fungidziro yeimwe yemakambani anotungamira muIbex 35 ichave iri padhuze nemamiriyoni mazana matanhatu nemazana matatu ezviuru munguva ye6.300-2018. Kuve chimwe chezvikonzero zvikuru zvekuchinja uku kwakaitwa ku kusiyanisa nzira yemubhadharo pakati pevashandi. Chero zvazvingaitika, zvave zvichishamisa zvikuru kune chikamu chikuru chevamiriri vemari vanotarisira kuenderera mberi murudzi urwu rwemubhadharo mumisika yemari. Mupfungwa iyi, iwe unogona kugadzira yakanaka mwero wekusagadzikana mumutengo wezvikamu zvako.
Izvo zvinofanirwawo kucherechedzwa kuti idzi data dzakapihwa neEndesa dzinomiririra a 7% avhareji kukura kwegore, iyo pakupedzisira inomiririra zana muzana kupfuura izvo zvinofungidzirwa muchirongwa chekare chekambani yesimba remagetsi. Kune rimwe divi, isu hatigone kukanganwa kuti uyu wakanyorwa muspain equity musika iri panzvimbo yakakosha kwazvo mutsika yadzo yechinyakare yebhizinesi. Mupfungwa yekuti iri kuzotarisa zvakanyanya pasimba rinowedzerwazve sosi yezvikomborero zvainogona kuwana kubva mumakore mashoma anotevera.
Inotsigirwa nevamiriri vemari
Sarudzo yekambani yemagetsi yekudzora kukosha kwechikwereti kuenda ku80% yemubereko wakawanikwa wakawana mvumo yemamwe anokosha emari masangano. Mupfungwa iyi, kubvira Bankinter fungidzira kuti iyo "Kusimbiswa kweiyo 2020 BNA nhungamiro uye chikamu chikamu inhau dzakanaka dzechitoro. Iyo inotevera kucheka mumitemo inodzoserwa mukugovera uye mukana wemakambani mashandiro anozotarisa kutarisisa kwevatyairi pakuratidzwa kwePlan Chero zvazvingaitika, kuve wakanyatso tarisa nezve chinzvimbo mukambani yekureva magetsi.
Pachinzvimbo, maneja wehomwe JP Morgan anokanda mimvuri pamusoro peichi chiyero, achiyambira kuti "tinonzwisisa, uye isu takatarisira, meseji yekuti, mukufamba kwenguva, kubhadharwa kwechikamu kunofanira kunge kuri pasi pezana remubhadharo , asi isu tinotenda kuti meseji ingadai yakave yakarongedzwa kubva kune imwe pragmatic yekuona iyo yakadzivirira pfungwa yekuti chikamu chemugove pachaderedzwa neinosvika gumi muzana muna100 uye kuti hapana kuoneka kubva ipapo.
Pamatanho e20 euros pamugove
Chero nzira, chinhu chimwe chiri pachena uye ndechekuti kukosheswa kwemasheya kuri kufamba munzira inotangira kubva pa17 uye kusvika ku21 euros. Kana danho rekupedzisira iri rikapfuudzwa, raizonyudzwa mune imwe yeanonyanya kufarirwa masimendi madiki nepakati, izvo zvingave zvisina mumwe kunze kwekunonzi kusimuka kwemahara. Ndokunge, zvaisazove nezvipingamupinyi zvekusvika pakakwirira mudenga mumutengo. Kunze kwekucheka kwakakodzera kunogona kubuda kubva pane ino yakajeka kupaza kusvika kumusoro. Iko ingangove iine mukana wepamusoro-soro wekumusoro uyo unogona kutungamira kumatengo angave anonakidza kwazvo kuvanhu vakazvimisikidza mune iyi kukosha kweiyo inosarudzika indekisi yeSpanish equities.
Huwandu hwekumuka kwemahara hwaive chimwe chezvinangwa zvakanyanya zveEndesa uye kana chikamu chacho chadzikiswa kubva pakuyerwa kwemitengo yaro. Nekuti zvaizoreva kusimbiswa kwe zvakajeka bullish muitiro uye mune ese mazwi: mapfupi, epakati nepakati. Beyond kumwe kufunga kwehunyanzvi uye pamwe zvakare kubva kune yakakosha nzvimbo yekutarisa. Chero zvazvingaitika, Endesa ndiyo imwe yetsika dzekufungisisa mugore rino ratichangotanga, kunyangwe hazvo kufambiswa kwemafambiro aro hakusi kweimwe yepamusoro pamusika wemasheya weSpanish.
Nekudaro, vamiririri vezvemari parizvino vanopa iyo isinganyanye yekutsamwa yekuongorora ingangoita, ingangoita 5%. Kunyangwe chiri chokwadi kuti vachatofanira kuongorora nhau dzichangoburwa dzakagadzirwa kubva kukambani iyi. Kunyanya, shanduko mukutarisa zvine chekuita nekubhadharwa kwezvikamu. Zvese izvi munzvimbo yemagetsi chikamu icho yakavandudza zvakanyanya mumwedzi ichangopfuura uye izvo zvinokanganisa makambani akanyorwa mune yakasarudzika indekisi yeSpanish stock market, senge Iberdrola, Enagás, Red Eléctrica Española kana yaimbova Gasi Natural.
Kune rimwe divi, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti Endesa inomiririra imwe yeanonyanya kutsiga tsika dzeSpanish equities. With chaizvo kushomeka kushoma uye chii chakanyanya kukosha kune vazhinji vevatengesi vanozvidzivirira mumusika, paine misiyano mishoma pakati pemitengo yavo yepamusoro nepashoma muchikamu chimwe chete chekutengesa. Semhedzisiro yeaya akasarudzika maitiro, kuchengetedzeka uku kunogona kuve imwe yeakanakisa tsika pamusika wemasheya kuchengetedza mari yedu panguva dzekusagadzikana kukuru mumisika yemari. Kubudikidza nekuita zvirinani kupfuura mamwe makambani akanyorwa.
Yakagadziriswa mari gore rega
Chekupedzisira, hazvifanirwe kukanganikwa kuti kunyangwe paine zvese izvi zvinhu, iyi kambani ichaenderera nekugovera zvikamu pakati pevachagovana navo. Saka kuti nenzira iyi, ivo vanokwanisa kuumba portfolio yemari yakatarwa mukati meiyo kusiana, iine mari yakatarwa uye yakavimbiswa gore rega rega. Chero chii chinoitika mumisika yemari.
Iko kuri zvakare kucherechedzwa kuti "Zvinangwa zvenguva yakaumbwa mumakore 2009 uye 2020 zvinoenderana nekufungidzira kwakadzikama kunofanirwa kusundira fungidziro yeBloomberg kusvika mudhiresi yepasi imwechete kana yepakati, "sekutaura kwevaongorori vezvemari veJP Morgan.
Hazvishamisi kuti ivo vanosimbisawo chakaipa pachikamu chekambani, senge kuti iyo dividend maitiro anotumira meseji yakaipa kune vanoita mari. Mupfungwa yekuti inogadzira meseji inovhiringidza nezve izvo zvichaitika pamwe nekuunganidzwa kwezvikamu kubva panguva inofungidzirwa nekambani yemagetsi iyi. Nezvinogona kugadziriswa mumitengo yaro semhedzisiro yekusahadzika kwawakagadzira pakati pevatengesi. Semhedzisiro yeaya akasarudzika maitiro, kuchengetedzeka uku kunogona kuve imwe yeakanakisa tsika pamusika wemasheya kuchengetedza mari yedu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Endesa ichadzikisa chikamu chayo kubva muna 2021